कभर स्टोरी पढेर आशा जाग्यो - प्रतिक्रिया - साप्ताहिक
कभर स्टोरी पढेर आशा जाग्यो
युवा पुस्ताका नयाँ अभिनेत्रीहरूका बारेमा पढेर आशा जाग्यो (फ्रन्टपेज : मनोरन्जनका न्यू ड्रिम गर्ल) । यीमध्ये केहीबाट बुलन्द अभिनयको अपेक्षा गरिएको छ ।
मनोज गजुरेलको लेखमा तिखो व्यंग्य छ (मंगल होस् : तातोपानी : खन्याउने कि डुबाउने ?) वास्तवमा देश बनाउँछु भन्ने नेताहरूले सोच्नैपर्ने भएको छ । आफूलाई भोट दिएर यो अवस्थासम्म पुर्‍याउने जनताका बारेमा पनि गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्ने हो । यद्यपि त्यसको ठीक विपरीत भैरहेको छ । सामाजिक सञ्जालका साथै बाहिर पनि नेताहरूमाथि प्रश्न उठ्दा गम्भीर हुनुपर्ने हो ।
हरेक समस्याको समाधान हुन्छ (युवा मन : समाधान) । कसरी त्यो समस्या समाधान गर्ने भन्ने कुरा मुख्य हो । मानिसको जीवनमा आत्मविश्वास र हिम्मत निकै ठूलो कुरा हो । मानसिक रूपमा बलियो भएको अवस्थामा बाँकी समस्या आफैं समाधान हुन्छन् ।
शैक्षिक अभियन्ता सूर्य कार्कीको विचारसँग सहमत छु (अन्तरवार्ता : अमेरिका बसेर समस्या देखाउने भीडको हिस्सा बन्न चाहिनँ) । आफूले पाएका अवसरहरू छाडेर स्वदेशका लागि केही गर्छु भन्दै फर्किएका कार्कीलाई सलाम छ । विदेशमा रहेका अरू युवाहरूले उनको बाटो पछ्याऊन् । यसरी स्वदेश फर्कंदा एकातिर समाजलाई धेरथोर फाइदा हुन्छ भने अर्कातिर आफैंलाई आत्मसन्तुष्टि मिल्छ । के गरौं ? भन्ने दुविधा भएका युवाहरूले सूर्यजीबाट प्रेरणा लिनुपर्छ ।
नर्सिङ पढेर बिदेसिनुभन्दा स्वदेशको सेवामा समर्पित हुनु धेरै राम्रो हो (नर्सिङमा छ अवसर) । पैसाकै लागि बिदेसिनुको साटो नेपालका ग्रामीण भेगमा गएर सेवा गर्न सकिन्छ । स्वदेशमा पनि अवसरहरू नभएका होइनन् । सबै युवा बिदेसिने हो भने नेपालको समस्या कसले सम्बोधन गर्ने ? नेपाल र नेपालीका बारेमा सबैले सोच्नु जरुरी छ ।
चीनको यो काम अचम्मको छ (साइन्स एन्ड टेक्नो : कृत्रिम चन्द्रमा बनाउँदै चीन) । आफ्नो देशका लागि चीनले गर्दै आएका नयाँ–नयाँ काम आश्चर्यचकित तुल्याउने खालका छन् । नेपालमा भ्यू टावर बनाउनेहरूले सोचून् र गम्भीर रूपमा मनन् गरून् । नीति–निर्माताहरूले पनि देशमा नयाँ काम गर्नेतर्फ सोचून् । यस्तो निर्णय गरियोस्, जसले कुनै अर्थ राखोस् । त्यसलाई जनताले पछिसम्म सम्झिउन् ।
गायक वसन्त थापाद्वारा सिर्जित गीत मौलिक छन् (टर्निङ प्वाइन्ट : सांगीतिक क्षेत्रलाई नबुझ्दै एल्बम निकालेँ) । नेपाली जनजीवनमा गाइने गीतको प्रचार–प्रसार एवं प्रवद्र्धन गर्नु जरुरी छ । वसन्त जीजस्ता गायकले आफ्नो कर्मलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । रारारात चर्चामा नआए पनि कुनै न कुनै बेला दर्शक तथा श्रोताहरूले तपाईंको मूल्यांकन गर्ने नै छन् । एकछिन बजार तताएर भीडमा हराउनुभन्दा दर्शक तथा श्रोताहरूको मनमा बास गर्नु महत्वपूर्ण कुरा हो ।
चर्चित गायक तथा संगीतकार शम्भुजित बासकोटाको पुनरागमनले खुसी तुल्यायो (संगीत : शम्भुजितको पुनरागमन) । पहिलेजस्तै बासकोटाबाट मीठा–मीठा गीतको अपेक्षा गर्छु । उहाँले आफ्नो अनुभव युवा पुस्तासँग बाँड्न पनि जरुरी छ ।
मनीषा कोइरालालाई धेरै–धेरै बधाई (मनीषा कोइरालाको आत्मकथा) । क्यान्सरबाट गुज्रिएर पुरानै अवस्थामा फर्किएकी मनीषाको कथा धेरैका लागि प्रेरणादायी हुनेछ । हामी उनको पुस्तकको पर्खाइमा छौं ।
कल्याण अधिकारी, अरुण प्रधान
भारतीय च्यानल जिटिभीको लोकप्रिय रियालिटी शो सारेगमपमा पुग्न सफल मेनुका पौडेलको सफलताले हामी सबैलाई हौस्याएको छ (अघि बढ्दै मेनुका) । अझ भारतमा उनको गायनको प्रशंसा हुँदा गर्व लागेको छ । मेनुकाजस्तै लुकेर बसेका प्रतिभाहरूले पूर्ण आत्मविश्वासका साथ अघि बढ्नुपर्छ । आफूमा भएको हिन भाबना त्याग्नुपर्छ ।
गायक, गीतकार तथा संगीतकार जगतमर्दन थापालाई सम्मान गरिएको समाचार पढेर अत्यन्तै खुसी लाग्यो (म्युजिक अपडेट : थापालाई सम्मान) । उहाँजस्ता अग्रज कलाकारलाई चटक्क बिर्सन मिल्दैन । पुरानो पुस्ताका अग्रज कलाकारहरूलाई यसरी नै सम्मान गर्नुपर्छ ।
दियालाई दयारानीबाट आशा
चोट बिर्सने आशा